बाइबल सम्बन्धमा (२) | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
बाइबल सम्बन्धमा (२)
बाइबल व्याख्या गर्ने धेरैजसोले तार्किक निचोड प्रयोग गर्छन्, र तिनीहरूको कुनै वास्तविक पृष्ठभूमि हुँदैन। तिनीहरू धेरै चीजको निचोड निकाल्न तर्क प्रयोग गर्छन्। वर्षौंदेखि, कसैले पनि बाइबललाई चिरफार गर्न वा बाइबललाई “हुँदैन” भन्न हिम्मत गरेन, किनकि यो पुस्तक “पवित्र पुस्तक” हो र मानिसहरूले यसलाई परमेश्‍वरको रूपमा पुज्छन्। यस्तो हजारौं वर्षदेखि हुँदै आएको छ। परमेश्‍वरले यी कुरामा कुनै ध्यान दिनुभएन, र कसैले पनि बाइबलको भित्री कथा पत्ता लगाउन सकेको छैन। हामी बाइबललाई मूल्यवान्‌ बनाउनु भनेको मूर्तिपूजा हो भनी भन्छौं, तैपनि ती भक्त विश्‍वासीहरू यस प्रकारले हेर्ने आँट गर्दैनन्, र तिनीहरूले तँलाई भन्नेछन्: “मित्र! त्यसो नभन, त्यो ज्यादै नराम्रो कुरा हो! तिमी कसरी ईश्‍वरनिन्दा गर्न सक्छौ?” त्यसपछि उनीहरूले दुःखित अभिव्यक्ति दिनेछन्: “हे कृपालु येशू, मुक्तिदाता, उसको पाप क्षमा गर्नुहोस् भनेर म तपाईंलाई बिन्ती गर्दछु, किनकि तपाईं मानिसलाई प्रेम गर्नुहुने प्रभु हुनुहुन्छ, र हामी सबैले पाप गरेका छौं, कृपया हामीलाई महान् करुणा देखाउनुहोस्। आमेन।” यसले नै तिनीहरू कति “धर्मात्मा” छन् भन्ने देखाउँछ; सत्य स्वीकार्न तिनीहरूलाई कसरी सजिलो हुन सक्थ्यो? तेरो भनाइबाट नै तँ बेवकुफ छस् भनेर उनीहरू डराउँछन्। बाइबल मानव विचार र मानव धारणाले कलङ्कित हुनसक्छ भनेर कसैले सोच्‍ने हिम्मत गर्दैन र यो त्रुटि कसैले देख्न सक्दैन। बाइबलमा भएका केही कुरा व्यक्तिको अनुभव र ज्ञान हुन्, यसमा भएका केही कुरा पवित्र आत्माको ज्ञान हो, र त्यहाँ मानव बौद्धिकता र विचारको मिलावट पनि छ। यी चीजमा परमेश्‍वरले कहिले पनि हस्तक्षेप गर्नुभएन, तर यसको सीमा छ: यी चीजहरूले सामान्य मानिसहरूको सोचाइलाई नाघ्न सक्दैन, यदि नाघेको छ भने, यिनीहरूले परमेश्‍वरको काममा हस्तक्षेप गरिरहेका हुन्छन् र अवरोध पुर्याइरहेका हुन्छन्। सामान्य मानिसहरूको सोचाइ नाघ्‍ने कुरा शैतानको काम हो, किनकि यसले मानिसहरूलाई उनीहरूको कर्तव्यबाट अलग राख्छ। यो शैतानको काम हो, शैतानद्वारा निर्देशित छ र यस्तो क्षणमा पवित्र आत्माले तँलाई यस्तो व्यवहार गर्न दिनुहुन्न। कहिलेकहीँ, केही भाइ-बहिनीहरूले सोध्छन्: “के मैले यस्तो तरिकाले काम गर्नु उचित छ?” म तिनीहरूको कद हेर्छु र भन्छु: “छ!” कतिपय यसो भन्‍ने व्यक्तिहरू पनि छन्: “यदि म यस्तो वा त्यस्तो तरिकाले काम गर्छु भने, के मेरो अवस्था सामान्य छ?” र म भन्छु: “हो! सामान्य छ, विशेष गरी सामान्य!” अरू भन्छन्: “के मैले यस्तो तरिकाले काम गर्नु ठीक छ?” र म भन्छु: “छैन!” तिनीहरू भन्छन्: “किन यो उसको लागि ठीक छ र मेरो लागि छैन?” अनि म भन्छु: “किनकि तैँले जे गरिरहेको छस् त्यसको स्रोत शैतान हो, यो एउटा अवरोध हो र तेरो प्रेरणाको स्रोत गलत छ।” कहिलेकाहीँ काम प्रभावकारी नहुने समय पनि हुन्छ। भाइ-बहिनीहरू यसबारे अनजान छन्। केहीले मलाई निश्चित तरिकाले कार्य गर्नु ठीक हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सोध्छन्, जब म उनीहरूको कामले भविष्यको काममा अवरोध खडा गर्दैन भन्ने देख्छु, म यो ठीक भनी छ भन्छु। पवित्र आत्माको कामले मानिसलाई दायरा दिन्छ; मानिसहरूले पवित्र आत्माको इच्छालाई अक्षरशः पछ्याउनु पर्दैन, किनकि मानिसहरूमा सामान्य सोच, र कमजोरी हुन्छ र उनीहरूका शारीरिक आवश्यकता हुन्छन्, उनीहरूसँग वास्तविक समस्याहरू हुन्छन् र उनीहरूका दिमागमा त्यस्ता विचार हुन्छन् जसलाई आधारभूत रूपमा नियन्त्रण गर्ने साधन उनीहरूसँग हुँदैन। मैले मानिसहरूलाई माग्‍ने हरेक कुराको सीमा हुन्छ। केहीले मेरा वचन अस्पष्ट छन्, मैले तिनीहरूलाई जुनसुकै तरिकाले काम गर्न भनिरहेको छु भन्‍ने विश्‍वास गर्छन् किनकि मेरा आवश्यकताहरूको उपयुक्त दायरा छ भन्ने तँ जान्दैनस्। यदि यो तैँले कल्पना गरेजस्तो थियो भने—यदि मैले बिना अपवाद सबै मानिसहरूसँग उही माग गरेको थिएँ भने र उनीहरू सबैको कद समान हुनुपर्छ भन्‍ने माग गरेको भए—यसले काम गर्दैनथ्यो। यो असम्भव माग हो, र यो मानिसको कामको सिद्धान्त हो, परमेश्‍वरको कामको सिद्धान्त होइन। परमेश्‍वरको काम मानिसहरूको वास्तविक अवस्था अनुसार सम्पन्न गरिन्छ र त्यो तिनीहरूको जन्मजात क्षमतामा आधारित हुन्छ। यो सुसमाचार फैलाउने सिद्धान्त पनि हो: तिमीहरू प्रकृतिलाई यसको मार्ग लिन दिँदै, बिस्तारै अगाडि बढ्नैपर्छ; केवल जब तिमीहरू कसैसँग उनीहरूले बुझ्ने गरी स्पष्ट सत्य बोल्न सक्छौ, त्यसबेला मात्र उनीहरू बाइबललाई पन्छ्याउन सक्षम हुनेछन्। यदि परमेश्‍वरले यो कामको यो चरण गर्नुभएन भने, प्रचलन तोड्न को सक्षम हुनेथियो? को नयाँ काम गर्न सक्षम हुनेथियो? बाइबल बाहिर नयाँ मार्ग पत्ता लगाउन को सक्षम हुनेथियो? किनकि मानिसका परम्परागत धारणा र सामन्ती नैतिक सिद्धान्तहरू यत्ति कट्टर छन् कि, यी चीजहरूलाई आफै त्याग्ने क्षमता तिनीहरूसँग छैन, न त तिनीहरूसँग यसो गर्ने साहस नै छ। यसो भन्‍नुको अर्थ आजका मानिस बाइबलमा भएका केही मृत वचनद्वारा कसरी नियन्त्रण गरिएका छन्, ती वचनबाट जसले उनीहरूको हृदय कब्जा गरेको छ भन्ने होइन। तिनीहरू कसरी बाइबल त्याग्न इच्छुक हुन सक्थे? तिनीहरू कसरी सजिलैसँग बाइबल बाहिरको मार्ग स्वीकार्न सक्थे? त्यो तबसम्म हुँदैन जबसम्म तँ बाइबलको भित्री कथा र पवित्र आत्माको कामको सिद्धान्तबारे स्पष्ट रूपमा बोल्न सक्दैनस्, ता कि सबै मानिसहरू पूर्ण रूपमा विश्‍वस्त हुन सकून्—जुन अत्यन्तै आवश्यक कुरा हो। किनभने धर्ममा सबैले बाइबललाई आदर गर्छन् र यसलाई परमेश्‍वरको रूपमा पुज्छन्, उनीहरूले परमेश्‍वरलाई पनि बाइबलभित्र नै सीमित गर्ने प्रयास गर्छन् र यो यस्तो पनि हो कि उनीहरूले फेरि एकचोटी परमेश्‍वरलाई क्रूसमा कीला ठोकेपछि मात्र तिनीहरूले आफ्ना लक्ष्य प्राप्त गर्छन्।